Indawo yokuhlala "La Casa di Anna", uPatti Marina
Umgangatho ophantsi wendlu yekhondom encinci, eneveranda enkulu yabucala. Ulwandle oluhle kakhulu kunye nehlathi lalo lepine kumgama wokuhamba (50m). Ifakwe ngasemva kolwandle lwasePatti, apho kumnandi khona ukuthatha uhambo kwaye ume kwenye yeekhefi ezingenakubalwa eziyibonakalisayo. Kuyenzeka ukuba uququzelele uhambo olumnandi kwii-Aeolian Islands kunye neofisi yetikiti kunye ne-pier engaphantsi kwe-50m. Indawo yokupaka kawonke-wonke kunye nehlawulelwayo emva kwendlu
Kukho iveranda ye-40sqm apho unokuchitha iiyure uphumle ngezitulo ezitofotofo. Le ndlu ixhotyiswe ngenkqubo yomoya esebenza kuzo zonke iindawo. Ikhitshi likhululekile kwaye lisebenza kunye ne-induction hob kunye nomatshini we-pod wekofu, iti, itshokolethi, ...
UPatti Marina wazalwa njengelali encinci yoomatiloshe kwaye uye wagcina umtsalane wayo kule minyaka idlulileyo. Namhlanje kukho iicafe ezininzi ngaselwandle. Kungekude kwamanye amaziko anje ngeSan Giorgio, eCapo Calavà, eMongiove ...
Ukusuka kwinqanaba lembali kukho i-Roman Villa e-Patti Marina, efikelelekayo ngeenyawo kwi-15 min. Ikwakufuphi neTindari edume ngendawo engcwele enikezelwe kwiMadonna, yethiyetha yaseRoma ejonge ulwandle kunye namachibi aseMarinello.
Ngaphakathi uya kufumana incwadana enamanani aluncedo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Patti